मनोरंजन – Page7– " कञ्चनजंगा News "
काठमाडौँको जोरपाटीमा एक युवाले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । रौतहट घर भइ जोरपाटीको दक्षिणढोका नजिकै रहेको एक गलैचा उद्योगमा काम गर्दै आएका टेक बहादुर तामाङ गलैचा कारखानामा रहेको एक फलामको डन्डीमा झु’न्डिएको …
काठमाडौं । अहिले सामाजिक संजालमा तातिरहेको घ टना हो चितवनको सन्तोश सुनार र प्रमिला सुनारको कहानी। श्रीमान सन्तोश बिदेशको छण् डिग्रीको घाममा कमाएको सबै पैसा लिएर र भएको जग्गा पनि लिएर …
दक्षिणकाली मन्दिर राजधानी काठमाडौंबाट दक्षिण भेगमा करिब १७ किमिको दुरीमा रहेको छ। यो कालीदेवीको मन्दिर हो।यो मन्दिर राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो फर्पिङको मुटुस्थित ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण मन्दिर हो। …
चर्चित नायक बिराज भट्ट यहि माघ २४ मा आफ्नो नउाँ चलचित्र साङलो लिएर दर्शक माँझ आउँदैछन् । मसलेदार चलचित्र साङलोमा बिराज भट्टसँगै निकिता चाण्डक, कामेश्वर चौरासिया, जय नन्द लामा, शिशिर भण्डारी …
चर्चित नायक बिराज भट्ट यहि माघ २४ मा आफ्नो नउाँ चलचित्र साङलो लिएर दर्शक माँझ आउँदैछन् । मसलेदार चलचित्र साङलोमा बिराज भट्टसँगै निकिता चाण्डक, कामेश्वर चौरासिया, जय नन्द लामा, शिशिर भण्डारी आदि कलाकारहरुको मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन पनि बिराज भट्टले नै गरेका हुन् ।
यसैबिच फिल्मको गीत चरीले काफल टिप्यो चर्चामा रहँदा साङलोको ट्रेलरको प्रतिक्षा दर्शकहरुलाई निकै छ । दर्शकहरुलाई जानकारी दिदै बिराज भट्टले फिल्मको ट्रेलर चाँडै नै दर्शक माँझ आउने बताए । बिराजलाई के तपाई धनगढीको डन हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिए, भिडियो हेर्नुस
जातिय भेदभाव र छुवाछुतको अपराधको जाहेरी नलिने र मिलापत्र गराउने प्रहरीलाई कार्वाही
विराटनगर । जधन्य जातिय भेदभाव र छुवाछुतको अपराधको जाहेरी नलिने र मिलापत्र गराउने प्रहरीलाई कार्वाही गर्ने एक नम्बर प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
सोमवार विराटनगरमा मानव अधिकार महाभेलामा बोल्दै एक नम्बर प्रदेश सरकारका प्रबक्त्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मान्छेले मान्छेलाई गर्ने जतिय बिभेद र छुवाछुत जधन्य अपराध भएकोले मिलापत्र गराउने प्रहरी वा कर्मचारी जोसुकैलाई सरकारले कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । दलितहरुको मानव अधिकारको अबस्था र आगामी योजनाहरुबारे बोल्दै मन्त्री कार्कीले एक नम्बर प्रदेशलाई जातिय छुवाछुत मुक्त्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै छुवाछुतका घटना मिलापत्र गराउने प्रहरी , न्यायिक समितका पदाधिकारी वा प्रशासनका कर्मचारी जोसुकैलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।
उनले दलितहरुको पक्षमा निर्माण भएका कानुनहरुकोवारे जानकारी गराउन तल्लो तहसम्म प्रदेश सरकारले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने रछुवाछुत अन्तकालागि प्रयास गर्ने अभिन्ता , अभिभावक र नागरिक समाजलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरे । मानव अधिकारको पालना राज्य सरकारको दायित्व भएकोले प्रदेश सरकार संबिधान , अन्तराष्टिूय कानुन अनुसारको आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सचेत रहेको बताउदै मन्त्री कार्कीले जातिय छुवाछुत बिरुद्ध क्षमता अनुसारको सयन्त्र परिचालन गरेर जागरण अभियान संचालन गराउने जानकारी पनि गराए ।
प्रदेश सांसद जयराम यादबले आफनो गर्वकालागि पिडित समुदायनै सघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दाबेदारहरु सक्रृय भएमात्र कानुनमा उल्लेख भएको समानताको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ भने । भेलामा प्रदेश सरकारका प्रमुख न्यायधिबक्त्ता चुडामणी आचार्यले जातिय बिभेद र छुवाछुत समाजिक कलङक भएकोले अन्त गर्नकालागि लागिपर्न सबै सचेत बर्गलाई आग्रह गरे ।
मोरङका सहायक सिडिओ सुरेश सुनारले कर्तव्य र दायित्वबोध सहित सबै लागिपरे मात्र मानव अधिकारको अवस्था बलियो हुन्छ भने । नेकपा केन्द्रिय सदस्य बिनोद ढकालले छुवाछुत अन्तकालागि गलत राजनैतिक प्रणालीलाई जस्तै कुसस्कार बिरुद्ध आन्दोलन चलाउन आवश्यक छ भने । मोरङका एसपी बिश्व अधिकारीले प्रहरी नागरिकहरुकैलागि भएकोले मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने वताए ।
जिसस मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल , मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापा,नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश अध्यक्ष बिक्रम लुईटेल , नेपाली काँग्रेसका नेता यदुकुमार बिष्ट , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक नम्बर प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशी , उमेश बिश्वकर्मा लगायतले सरकारले हस्ताक्षर गरेको सन्धि र अभिसन्धिहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गराएमात्र बर्षौदेखी उत्पिडन भोग्दै आएका दलितहरुले मानव अधिकार वहाली भएको अनुभुति गर्ने वताए ।
७१औ मानव अधिकार दिवसको सन्र्दभमा सोमवार विराटनगरमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाहरुले प्रादेशिक महाभेला आयोजना गरेका हुन् । महाभेलामा दलित मानव अधिकारको अवस्थाबारे चर्चा भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका निर्वतमान केन्द्रिय सदस्य गणेश लम्सालले दलितहरुको मानव अधिकारको अवस्था र चुनौतीबारे अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
जब सलमान खानले ऐश्वर्यालाई विवाहको प्रस्ताव राखे तब ऐश्वर्याले…
एजेन्सी । सलमान र ऐश्वर्याको प्रेम कहनी सन् १९९७ मा शुरु भएको थियो जब ऐश्वर्याले बलिउडमा भर्खरै पाइला टेकेकी थिइन् । त्यहि नै बेला सलमान सोमीसँग गहिरो प्रेममा थिए र उनीसँग …
र अन्त्यमा यी दुईको प्रेमले निकै चर्चा पायो तर सलमानको आफ्नै व्यवहारले सुन्दर एउटाको सम्बन्धको भने अन्त्य भयो । त्यसपछि ऐश्वर्याको जीवनमा अभिषेकको आगमन भयो र उनीहरुको बिहे भयो ।
उनीहरुको प्रेम कहानी निकै सुन्दर र प्यारो थियो । ऐश्वर्या सलमानको निकै नजिक हुँदै गएकी थिइन् सलमानको परिवारमा पनि उनको आउन जान शुरु भयो भने सलमानका साथीहरुले ऐश्वर्यालाई भाउजू भनेर बोलाउन थालिसकेका थिए ।
तर हरेक सम्बन्धमा कोहि न कोहि वा केहि न केहि बाधा भएरै छोड्छ । ऐश्वर्याको परिवारलाई पनि सलमानसँगको सम्बन्ध त्यत्ति स्विकार्य थिएन । परिवारले सलमानलाई अस्विकार गरेपछि ऐश्वर्याले सलमानको लागि घर छोडेर मुम्बईमा एक्लै समेत बसेकी थिइन् ।
सुत्रको अनुसार एक दिन आधा रातमा सलमान खान ऐश्वर्याको घरमा पुगेका थिए । र ढोकामा ठूलो ठूलो आवाजले धक्का दिए तर ढोका नखुलेपछि सलमानले छतबाट हामफाल्ने धम्की समेत दिएका थिए । उनी करिब विहानको ३ बजेसम्म ढोका ढक्ढक्याइरहेका थिए । मानिसहरु भन्छन् ढोकामा हान्दा हान्दा उनको हातमा रगत समेत आएको थियो ।
सलमान ऐश्वर्यासँग तुरुन्तै बिहे गर्न चाहान्थे तर उनी भने सफलताको सिँढी चढ्दै थिइन् । उनले विवाहभन्दा पनि करिअर प्रति बढी ध्यान दिएपछि सलमानसँग विवाह गरिनन् ।
यिनी हुन् कमशेराप । उनी तिब्बतमा जन्मिएकी हुन् । तर उनलाई नेपाललाई नै माया लाग्छ । जन्मभूमी तिब्बत भएकाले तिब्बतको पनि माया नलाग्ने भने होइन । तर नेपालमै धेरै भिजेकोले उनलाई …
रिलिज अगावै सलमानको यो फिल्मले कमायो १ सय ५५ करोड
सलमान खान स्टारर ‘दबंग’को तेश्रो सिरिज ‘दबंग ३’ले रिलिज अगावै १ सय ५५ करोड कमाएको छ। दैनिक भाष्करका अनुसार यो फिल्मले अमेजन प्राइमलाई अनलाईन स्ट्रिमिङ, टी सिरिजलाई म्युजिक र जी नेटवर्कलाई …
सलमान खान स्टारर ‘दबंग’को तेश्रो सिरिज ‘दबंग ३’ले रिलिज अगावै १ सय ५५ करोड कमाएको छ। दैनिक भाष्करका अनुसार यो फिल्मले अमेजन प्राइमलाई अनलाईन स्ट्रिमिङ, टी सिरिजलाई म्युजिक र जी नेटवर्कलाई स्याटलाइट राइट्स बेचेको छ।
खबरअनुसार फिल्मले डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम भिडियोलाई ६० करोडमा बेच्यो। त्यस्तै जी नेटवर्कले ८० करोडमा स्याटलाइट राइट्स खरिद गर्याे भने टी सिरिजले १५ करोडमा म्युजिक राइट्स खरिद गर्याे।
डिसेम्बर २० मा रिलिज हुने यो फिल्ममा सलमानको अलावा सोनाक्षी सिन्हा, साईं मांजरेकर, किच्चा सुदीप प्रमुख भूमिकामा छन्। फिल्मलाई प्रभु देवाले निर्देशन गरेका छन्।
‘यो एकदमै सलमान खान फिल्म हो। दर्शकले सलमानलाई पर्दामा जस्तो देख्न चाहन्छन्, उनको चरित्र फिल्ममा त्यस्तै छ। यो फिल्म तुलनात्मक रुपमा ‘दबंग’ सिरिजकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म हुने पक्का छ,’ फिल्ममा सलमानको चरित्रलाई लिएर निर्देशक प्रभु देवाले दावी गरेका छन्।
विमानमा उड्दा शरीरमा के हुन्छ ?
एजेन्सी । विमानमा उड्दैगर्दा मानिसको शरीरमा विभिन्न परिवर्तन आइरहेका हुन्छन् जसबारे प्रायः मानिसहरुलाई थाहा हुँदैन । उचाइमा पुग्दा त्यहाँ हावाको चापदेखि तापमान सबै पृथ्वी सतहभन्दा फरक हुने हुनाले पनि नयाँ वातावरणसँग अनुकूल रहन शरीरमा विभिन्न बदलाव हुने गर्दछ ।
सबैभन्दा पहिले त उडिरहेको समयमा हामीलाई जलवियोजन हुने गर्दछ । किनकि विमानभित्र हामी जुन हावामा सास फेरिरहेका हुन्छौँ, त्यो अत्यन्तै सुख्खा हुन्छ । बाहिरको हावामा एकदम थोरै बाफ हुने हुनाले पनि त्यसले विमानभित्रको हावालाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जस्तै क्याबिनभित्र हावामा बाफको दर ५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन्छ जुन केही मरुभूमिसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
यस्तोमा अधिक पानी पिउनुले थकान र टाउको दुखाइबाट बचाउन सक्छ ।अर्को परिवर्तन भनेको हाम्रो स्वाद लिन सक्ने क्षमतामा आउने गर्दछ । जसकारण उडानको समयमा जुनसुकै खानेकुरा पनि नमिठो लाग्न सक्छ ।
वास्तवमा हावामा बाफको कमि हुनुले हाम्रो नाकभित्रका मेम्ब्रेनहरुलाई पनि सुख्खा बनाइदिएको हुन्छ जसले हाम्रो जिब्रोको क्षमतामा कमी ल्याउँछ । त्यस्तै विमानको इन्जिनको आवाजले पनि यसलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यसले गुलियो र नुनिलो खानेकुराको स्वाद थाहा पाउने क्षमता ३० प्रतिशतले कम गराउँछ ।
तेस्रो शारीरिक बदलाव भनेको हामीलाई आफू फुलिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।
विमानहरुमा हावाको चाप सामान्य अवस्थामा भन्दा अत्यन्तै कम गरिएको हुन्छ जसको हामीलाई बानी परेको हुँदैन । यसले हाम्रो शरीरभित्रका ग्यासलाई फैलाउँछ । जसकारण हामीलाई पेट फुल्ने, विचलित भएको जस्तो र ग्यास बढीरहेको महसुस हुन्छ ।
त्यसैगरी लामो समय विमानको यात्रा गर्नुले हाम्रो कानमा पनि उत्तिकै असर पारिरहेको हुन्छ । हावाको चापमा लगातार बदलाव आइरहँदा हाम्रो कानलाई सन्तुलनमा आउन कठिन भइदिन्छ । यसैकारण हामीलाई कान दुखेको जस्तो र घरिघरि पड्किएको जस्तो लाग्छ ।
यसबाट राहत पाउन हामीले नाक बन्द गरि निल्न खोज्नुपर्छ । तर नाकबाट हावा फाल्ने प्रयास गर्यो भने चाहिँ त्यसले उल्टै हाम्रो कानको जालीमा गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ । –बिजनेस इन्साइडर
दोस्रो भ्वाइस अफ नेपालको उपाधि राम लिम्बुलाई, के–के पाए पुरस्कार ? हेर्नुहोस
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको अन्तराष्ट्रिय एक रियालिटी टिभी शो फाइनल सकिएको छ । दोस्रो भ्वाइस अफ राम लिम्बुलाई उपाधि थमाउँदै सकिएको हो । हिजो राति राजधानीको चुच्चेपाटीमा …
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको अन्तराष्ट्रिय एक रियालिटी टिभी शो फाइनल सकिएको छ । दोस्रो भ्वाइस अफ राम लिम्बुलाई उपाधि थमाउँदै सकिएको हो । हिजो राति राजधानीको चुच्चेपाटीमा भएको अन्तिम प्रतिष्पर्धाबाट लिम्बुले उपाधि हात पार्नुभएको हो । टीम प्रमोदमा रहेका लिम्बुले अन्य तीन जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै जित निकाल्नु भएको हो ।
उहाँ भोटिङका आधारमा दोस्रो भ्वाइस अफ नेपालको उपाधि हात पार्न सफल हुनुभएको हो । उपाधि जितेसँगै लिम्बुले ड्याट्सन गाडी, १२ लाख नगद र म्युजिक एल्बमको कन्ट्रयाक्टसमेत प्राप्त गर्नुभएको छ । कम भोट प्राप्त गरेका कारण प्रतिष्पर्धामा रहेका विकास लिम्बु, सनिष श्रेष्ठ र आरिफ रौफ पछि पर्नुभयो । प्रतियोगितामा दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, राजु लामा र आस्था रावत कोचको भूमिका रहनुभएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस: काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय गायन रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२’ को विजेता राम लिम्बु भएका छन् । आज बौद्ध स्थित ह्यातको ग्राउन्डमा आयोजना भएको ग्र्याण्ड फिनालेबाट उनी विजेता भएका हुन् । गत शुक्रबार राति सम्पन्न सेमीफाइनलबाट ८ जनाको प्रतिस्पर्धात्मक शो बाट उत्कृष्ट ४ जना फाइनलमा प्रवेश गरेका थिँए । फाइनलमा प्रवेश गर्नेहरुमा कोच दीपबाट बिकाश लिम्बु, कोच राजुबाट शनिष श्रेष्ठ, कोच आस्थाबाट आरुफ राव तथा कोच प्रमोदबाट राम लिम्बु थिँए ।
फाइनलमा प्रवेश गरेका प्रतिस्पर्धीले विजयीको लागि आज अन्तिम प्रस्तुति दिए । द भ्वाइस अफ नेपालबाट छानिने बिजेताले डाटसन रेडी गो कार, १२ लाख नगद पुरस्कार, १५ लाख बराबरको भिडियो एल्बम र विश्व सांगीतिक यात्राको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबै कोचहरु र सर्मथकहरु केही समयदेखि आफ्नो टिममा भएका प्रतिभाहरुलाई जिताउन तातिएर लागेका थिँए । सामाजिक सञ्जालमा सबैले लिम्बुलाई बधाई दिइरहेका छन् ।
सेलिब्रिटीहरु अन्तरवार्तामा स–साना कुरामा चिप्लिँदा ट्रोलको शिकार
सेलिब्रिटीहरु कहिलेकाहीँ अन्तरवार्तामा स–साना कुरामा चिप्लिँदा ट्रोलको शिकार हुनुपर्छ । जस्तो कि अहिलेकी हटकेक मोडल अञ्जली अधिकारी एउटा अन्तरवार्तालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेकी छिन् । एउटा यूट्यूव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा …
सेलिब्रिटीहरु कहिलेकाहीँ अन्तरवार्तामा स–साना कुरामा चिप्लिँदा ट्रोलको शिकार हुनुपर्छ । जस्तो कि अहिलेकी हटकेक मोडल अञ्जली अधिकारी एउटा अन्तरवार्तालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेकी छिन् ।
एउटा यूट्यूव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा अञ्जलीलाई उनको ‘रिलेसनसिप स्टाटस’ बारे सोधिएको थियो । तर, जवाफमा अञ्जलीले ‘फेसबुक स्टाटस’को कुरा गर्न थालिन् ।
‘मेरो स्टाटसमा प्राय गीतहरु नै हुन्छन्, आफूले खेलेका भिडियोका क्लीप्सहरु पनि राख्छु,’ उनले दिएको यही जवाफको क्लीप फेसबुक ग्रुपहरुमा सेयर भइरहेको छ । र, अंग्रेजी नजानेको भनेर धेरैले उनलाई खिसी गरेका छन् । यसमा अञ्जलीको प्रतिक्रिया भने आएको छैन ।
यसैबीच, नायिका तथा निर्मात्री दीपशीखा खड्का अञ्जलीको बचाउमा उभिएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरुमाथि आपत्ति जनाउँदै स्टाटस लेखेकी छन् । अंग्रेजी नेपालीको मातृभाषा नभएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘आफ्नो मातृभाषा नजानेको भए पो लाज, अरुका भाषा नजान्दा केको लाज ?’
उनले यूट्यूवरलाई पनि दनक दिएकी छन् । दिपशीखाले लेखेकी छन्, ‘एउटा यूट्यूवरले एउटा कलाकारको इन्टरभ्यू लिन्छ । अरे लाईभ त होइन नि यार । असुद्ध कुराहरु नराखे पनि हुन्छ नि । त्यसैलाई हाइलाइट गर्छन् । अरे अर्काको इज्जत फुकेर आफ्नो चुलो कि बाल्नु के ? किन ?’
प्रियंका र रेखाको दृष्टान्त
बोल्दा जिभ्रो चिप्लेर ट्रोलको शिकार हुनुको पीडा सायद नायिका प्रियंका कार्कीलाई जति कसलाई थाहा होला र ? उनले तीन वर्ष अगाडि एउटा अन्तरवार्तामा बोलेको संवाद अहिले पनि हाँसोको विषय बन्ने गरेको छ ।
धेरै वर्ष अमेरिका बसेकी प्रियंकाले यूएस र अमेरिका एकै हो भनेर नबुझेकी पक्कै होइनन् । तर, ऐन मौकामा जिभ्रो चिप्लिनु उनको दुर्भाग्य भएको छ ।उनै प्रियंकाले केही समयअघि अर्को एउटा अन्तरवार्तामा अझै ठूलो गल्ति गरेकी छन् । आफ्ना प्रेमी आयूष्मान देशराजसँगै दिएको अन्तरवार्तामा उनको मुखबाट अञ्जानमा छाडा शब्द निस्केको थियो ।
एक प्रश्नको जवाफमा उनले भन्न चाहेकी थिएन्, ‘जोजोले हाम्रो सम्वन्ध टिक्दैन भन्नुभएको छ, उहाँहरुको पनि त्यस्तै अनुभव भएर होला।’ तर, बोल्दा उनले ‘टिक्दैन’ को ठाउँमा अनर्थ बोल्न पुगिन् ।
त्यसो त केही समय अगाडि नायिका रेखा थापाले अन्तरवार्तामा हँसाएकी थिइन् । अमेरिका जाँदा उनले एक अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु एकदमै होमलेस भएको मैले पाएँ ।’ खासमा उनले ‘होम सिक’ भन्न खोजेकी थिइन् ।
यो वि.सं. २०२० साल तिरको कुरा हो । ५६ वर्ष अघिको । वरिष्ठ गायक कुमार बस्नेतलाई पाटन गाबाहालका सुन्दर श्रेष्ठले कलकत्ता जाऔं भने । त्यस ताका कुमार बस्नेत आफ्नो गीत ‘ओइ …
दोहोरी हेर्न गएका भाईरल भीम विक, उनकै बारेमा दोहोरी गाएपछि लाजले भुतुक्कै भए (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं -नेपालमा पछिल्लो समय भाईरलको ट्रेन्ड रहेको छ भने पछिल्लो समय नयाँ नयाँ मान्छे मिडियामा भाईरल हुँदै आएका छन। बाल गाएक अशोक दर्जी पछी सामाजिक संजालमा भाईरल हुने चलन बढेको पाईन्छ …
काठमाडौं -नेपालमा पछिल्लो समय भाईरलको ट्रेन्ड रहेको छ भने पछिल्लो समय नयाँ नयाँ मान्छे मिडियामा भाईरल हुँदै आएका छन। बाल गाएक अशोक दर्जी पछी सामाजिक संजालमा भाईरल हुने चलन बढेको पाईन्छ । कोही प्रतिभा भएर भाईरल हुँदै छन भने कतिपय उनीहरुको आनी बानि ले गर्दा चर्चामा आउने गरेका छन।
केहि समय पहिले भाइरल भएका तनहुँको देवघाटमा बस्दै आएका भिम बिकको पनि चर्चा कम छैन। उनको आनीबानी र बोल्ने शैलीलाई सबैले मन पराएका थिए भने एक समयमा देशका सबै मिडिया चितवन आएर भाईरल भिम बिकलाई कभर गरेका थिए। उनी भाईरल भिम बिकको बिषयमा एक कार्यक्रममा घम्साघम्सी दोहोरी छानेको छ। हालै सम्पन्न भएको चितवन महोत्सवमा भाईरल भिम बिकलाई समेटेर लाईभ दोहोरीमा गीत गाउँदा भिम बिक लाजले भुत्तुक्कै भएका छन। तलको समाचार पछि भिडियो हेर्नुहोला
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स० को वाइडबडी ए ३३० जहाजले अहिले औसत दैनिक १०।८ घण्टा उडान भर्दै आएको छ । नियामक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रथम चौमासिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार निगमको वाइडबडी जहाजको औसत उडान कम देखिएको हो ।
निगमको न्यारोबडी ए ३२० जहाजको उडान भने वाइडबडीको तुलनामा सन्तोषजनक छ । न्यारोबडीको औसत दैनिक उडान १२।९ घण्टा रहेको छ । एक महिनाअघि निगम मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष मदन खरेरले वाइडबडी जहाजले दैनिक १३ घण्टा उडान गर्दै आएको बताउनुभएको थियो ।
सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बीच पनि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीको तुलनामा आफूलाई अब्बल तुल्याएको छ । निगमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायु सेवा प्रदायक कम्पनीमा नेपाल एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको थियो । उक्त अवधिमा निगमले चार लाख ९३ हजार १७० यात्रुलाई सेवा दिई आफ्नो बजार हिस्सा ११।७ प्रतिशत ओगट्न सफल भएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सले अघिल्लो वर्ष एक नम्बरमा रहेको भारतको जेट एयरलाई उछिन्न सफल भएको थियो । हाल तीन नेपालीसहित २८ वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्र्दै आएका छन् ।
रेखा थापा -साँच्चै भन्ने हो भने मलाई मनपर्ने ड्रेस छोटा लुगा हैन, मलाई सुहाउने छोटा लुगा हो
कुनै जमाना यस्तो थियो, रेखा थापाको अभिनयभन्दा स्कर्टको चर्चा बहुतै हुन्थ्यो । छोटा–छोटा कपडामा ठाँटिएर हिँड्ने रेखा फिल्ममा पनि यस्तै ड्रेसअप गर्थिन् । समयको परिवर्तनसँगै उनी चलचित्रमा फरक–फरक ड्रेसमा देखिन थालिन् …
परिस्थितिअनुसार फरक–फरक ड्रेसअप साँच्चै भन्ने हो भने मलाई मनपर्ने ड्रेस छोटा लुगा हैन, मलाई सुहाउने छोटा लुगा हो । जे–जस्तो सुहाउँछ, त्यस्तै पहिरनमा सजिनुपर्छ भन्ने सोच छ मेरो । यद्यपि, परिस्थितिअनुसार फरक–फरक ड्रेसअप नगरेकी हैन ।ड्रेसअपलाई मौसमले प्रभाव पार्छ । जस्तो, जाडोमा छोटा लुगा लगाउने कुरा भएन । यो समयमा सारी र कुर्तामा सजिएर हिँड्न मनपर्छ । सारीमा सजिँदा ‘पूर्ण महिला’ भएको अनुभूति भित्रैदेखि जाग्छ ।
गर्मीमा हाफपाइन्ट, स्कर्ट, वानपिस जाडोमा जे कपडा लगाउँछु, गर्मीमा लगाउने कुरा भएन । यो समयमा हाफपाइन्ट, स्कर्ट, वानपिसमा सजिन मन लाग्छ । ड्रेसअनुसार चप्पल–जुत्ता मिलाएर लगाउँछु ।सातवटै रङमा सजिन्छु मलाई यस्तै रङका ड्रेसअप लगाउन मनपर्छ भन्ने छैन । सातवटै रङ प्रयोग गर्छु । यो रङको ड्रेस नलगाउने र मन नपराउने भन्ने छैन । सपिङमा पनि कपडा मनपर्नु पर्‍यो, कपडा उठाइहाल्छु ।
यदि हामी ज्योतिष शास्त्रलाई मान्ने हो भने हाम्रो शरिरको विभिन्न अंगहरुले तपाईको सोच तथा बानिहरु थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै हत्केलामा भएका बिभिन्न रेखाहरुले पनि व्यक्तिको बारेमा बताइरहेको हुन्छ । यस्तै …
कसैले यस्ताकुराहरुलाई वाइयात हो भनेपनि बिश्वमा विकशित मुलुकहरुमा पनि यस्ता कुराहरुलाई विश्वास गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यहाँ एक भिडियोमा तपाईको बुढी औलाको आकार कस्तो छ । सो अनुसारको फल तथा मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु बताइएको छ। हेर्नुहोस् तपाई पनि तपाईको औला अनुसार तपाईको स्वभाव कस्तो छ त ! जानी राखौ :-